Ngubani uMartin Vrijland? : UMartin Vrijland
Ngubani uMartin Vrijland?
Ngubani uMartin Vrijland kwaye kutheni ehlala ekhuthele ukubhala amanqaku?
Kwimihlathi embalwa ndachaza ukuba ezinye izinto eziseNetherlands zilawulwa ngokupheleleyo. Ndijolise ngokwenene ukuba 'ndilawulwe yinkonzo yamfihlo.' E-Netherlands, iqela libizwa ngokuba ngu-AIVD. Ukuze ukwazi ukubonisa ukuba, ngokwenene kufuneka ungene ngaphakathi. Ukuba ndiphantse ndiphumelele, kodwa kukho isenzo esininzi, esenza ukuba ndixoshwe. Into endiyifuna ngoko yenza ngokukhawuleza imbali yokuvela kwam njengombhali kwaye ubonise imida enokuzifundela ukuba uyavumelana nam isigwebo sam okanye cha.
Ukuqala kwam ukubhala kwi-2012, andifuni kuyenza loo nto ngonaphakade. Umqeshi wam wokugqibela apho bendisebenza njengomphathi weentengiso zamanye amazwe uye wabhanga kwaye ngexesha lomsebenzi endiwuqhubayo, ngequbuliso ndafumana isisu sam esigcwele 'iimfaneleko ezenziwe ngumsila kunye neemoto zokuqeshisa'. Ndigqibe kwelokuba ndibhale okomzuzwana (bendicinga 'okwethutyana') ndikhethe ipseudonym ukuba ingonakalisi iCV yam. Ndizivumele ukuba ndigxothwe ekubonisaneni okuhle, ndigcine ndinelungelo lokufumana izibonelelo. Oko kubhala kwaqala ngenqaku kwi (ngoku licinyiwe) iwebhusayithi I-Argusoog ka-Arend Zeevat kwaye kwagqitywa kwiwebhusayithi yam. Emva kweenyanga ezimbalwa, loo ndawo yahanjelwa ngequbuliso yaya kwi-150 kangangezihlandlo eziliwaka ngosuku ngecala le-Anass Aouragh. Kungenxa yokuba ndaye ndagqiba kwelokuba ndiye kwindawo 'yolwaphulo-mthetho' nekhamera, kuba uPeter R. de Vries wayethe kumabonwakude zonke iinwele kunye nazo zonke iifayili iya kuphandwa kulo ((self) icala lokubulala. Ndandifuna ukwazi ukuba oko kwakunjalo kwaye wahamba nekhamera yenkampu kwindawo. Kulapho ndafumana inkunkuma eninzi kwindawo apho uAnass wayefunyenwe khona kwaye amangqina athi bashiye inja yabo apho ngaloo ntsasa. Ngaloo nto ihlala kuyo yonke iNetherlands kwaye ndapapasha ingxelo ye-NFI autopsy. Oku kwafika enkulu kwiindaba, kuba akukho mntu wayekade ehamba ngaphambili, kodwa igama lam alizange likhankanywe (eliza kunika iindwendwe ezingakumbi kwi-site yam).
Ngokukhawuleza xa ndangena kuloo shishini, ndahlaselwa kunye nazo zonke iintlobo ze-intanethi kunye nokunyundela kwaye nangona kukho isimemezelo esicacileyo kakhulu, akukho nto eyenziwe malunga nayo nanamhla. Ukongezelela, akukho gqwetha elithemba ukutshisa inkqubo xa ndichaza ukuba kungangqinisisa ukuba le phulo livela kwikona kaRhulumente. Andizange ndifumene impendulo evela kummeli ovukelayo uSven Hulleman.
Ezinye iindaba zakhuthaza ngaloo mihla kwaye ndandixhaswa ngamasayithi kunye nabantu abazange ndive okanye bangaliva phambi kokuba ndiqale njengombhali. UMikha wayengomnye wabo. Kwaye ndamenywa kwi-symposium yeFrontier kwaye ndaza ndonyulwa ukuba 'I-Aron Frontier'. Emva koko izinto zokuqala zaqala ukuma. Ngoko ndiza kuxoxwa ngawo UJohan Consemulder, kodwa ngokukhawuleza awakwazi ukuhamba ngokukhawuleza. Ukusebenza kwam kwafakwe, kodwa akusasazwa naphi na. UMarcel Messing (igama elidumileyo kwiimidiya ezongezelelweyo) wandithatha kwigumbi emva komboniso wokuvala omnye umntu onogada. Lapha wandixelela ngasese ukuba ndimele ndilumkele. "Baye bangandichukumisa nje nge-weapon enegunya.
Ukutshintshela kwam kwimidiya ekhethiweyo sele kuchaswe ngokukrakra ngamaninzi eendawo ezibonakala zivela emhlabathini ngokukodwa ukunyelisa nokunyundela kwidilesi yam. Ndafumanisa ukuba ukuqhubela phambili kwesi sigxeko nokunyundela ngumqeshwa karhulumente (kunye nomfundisi we-OTO) Jeroen Hoogeweij wayeyiphi na loo mzuzu wayehlala ekhoneni kunye noMikha Kat. Nangona kunjalo, ndamkelwa nguMikha Kat. U-Kat wayedla igama elide kumanye amajelo, ngenxa yokuba wayesebenzela iminyaka echasene ne-pedophilia yowona mntu uphezulu: Joris Demmink. U-Kat wamenywa ukuba ndize kwiinkqubo zeDemmink kwisiseko seRupti Spijker kwaye ndihlawule umbane wam. Yonke le nto uKat wayebonakala ekwazi ukuphosa imali ngokungathi yinto, ukuze ithande ingqalelo. Ngexesha leeseshoni ndafumanisa ukuba amalungu esiseko uDemmink ummangalisa bekuncitshitshise kwaye ayikayika. Oku kwavusa umdla. Kutheni bathe bamphendula ngokunyamezela? Ngaba ndihlala kwikampu yabo? Xa ndabona i-orange ibhanki kwi-lapel yelungu lesiseko, ndazibuza ukuba ilungu lesiseko esiluhlasele kangangoko ilizwe laseDatshi lingagqoka i-ribbon ye-orange. Ngoko ke ndaya kumbumba kwimvelaphi yabantu elesisiseko. Ngokomzekelo, ndifumene ukuba le nkunkuma yebhanki (egama linguBen Ottens) incede ekuphuculeni ixabiso lelizwe elijikelezile iSchiphol ekusebenziseni ezolimo ekutheni umhlaba wokwakha. Intsapho yasePower, eyayixhasa le siseko i-Rustige Spijker, ingabangela iibhiliyoni ezivela kwilizwe laseDutch ngalawo mazwe (kuquka iiprojekthi zophuhliso ezikhohlisayo). Ndabona kwakhona ukuba isiseko sisebenzisana UJack Abramoff, indoda eyayiphakamise 'isikhundla esiphakeme' e-US ngefilimu yokuxhaphazwa ngokwesondo. Ngoko ke ngengozi kwaye ngephutha ndafumanisa ukuba uKhat waxhaswa ngemali yintsapho yasePower kwaye yonke into yaba ngumkhohlisi omkhulu. Ngoko ityala ngokumelene noDemmink alizange lijikeleze ngokukhawuleza ukuhlengahlengiswa kwezinto ezihamba phambili, kodwa ngokucacileyo ngakumbi malunga nokunyangwa kwelizwe laseDatshi.
Nangona kunjalo, zonke iiwebhusayithi kumajelo athile ngelo xesha azifuni ukuhlangabezana nokuxhaphazwa kwazo (kude kube lelo xesha) iqhawe likaMicha Kat. Ndade ndamenywa kwi-radio ekusasazeni apho ndingachaza oko ndifumene. Ndatshelwa ukuba oku kuza kuba yi-1 kwi-intanethi ye-1, kodwa ngexesha lokusasaza ngokusasazwa ngokukhawuleza ukuba uMicha Kat naye wasasazwa. Leyo indlela ephucukileyo, kodwa usasazo wenza Kat nganto, kuba ndakwazi nje nokuze ukuba ihlawulwe yi usapho Edom kwaye ngokwenene wasebenza uJack Abramoff. Yonke into ekhoyo yendaba isuke ingangandiboni njengophahla. Bathabatha konke ngenxa kum kule kuhlaselo opprobrious kwaye banganyelisi kwaye zonke (ngaphandle site Whistleblower Online Niburu.co kunye linguMika Kat) okanye azibekwa ngenkankulu unxulumanisa kumanqaku zam, kodwa ngoku kwafuneka ukuba mna siyaqondakala bahlaselwa ngisho ukuhlaselwa ngenxa yokungena kwam kuMikha.
Ngaphambi kokuba konke oko kwenzeke, ndade ndamenywa nguMarcel Messing ngohlobo lweentlanganiso zokudibanisa imibutho kwenye indawo yeendaba kumzantsi welizwe. Kulapho ndafumana inkxaso ngenxa yokuba ndanikelwa ukuhlawula iindleko zam fuel. Kwacaca ukuba inzuzo yam iWW yayiyoshishini ehla. Ndandingakwazi ukusinda ngolo xesha kwaye ngelo xesha indlu yam isele yaxoshwa ukuba iphoqelelwe ukuba iphile ngokunyanzeliswa. Yingakho kwafuneka ndiqhube emva kweeyure ze-4,5 kunye neeyure ze-4,5 kwidala elidala lokubasa. Ngethuba le ntla nganiso yezinye iiwebhsayithi zejelo, apho kuthiwa wonke umntu ogama lakhe negama lakhe likhona kula majelo eendaba (Marcel Messing, Ad Broere, Guido Jonkers, njl.), Ukusekwa kombambiswano kwaxoxwa ngazo. Kwakudingeka kubekho iqela lokudibanisa lenye yeendaba. UMarcel Messing wabonisa ukuba wayebazi abantu abafuna ukwenza izigidi zifumaneke. Ndifumene ukuba kubonwa ngokuphawulekayo kwaye kwaphakamisa umbuzo othi "aba bantu" baya kuba ngubani. Andizange ndifumanise, kuba ubukho bam bebude. Ndacacile ukuba ndatshutshisa emva kokuchazwa kukaMikha Kat.
Inyo kunye nalo
Ukususela ngo-2014 ngokukhawuleza ndawabona igama elitsha kwindawo. kwabonakala Elinye ibhinqa Irma Schiffer ngesiquphe ubhale amanqaku kwizihloko ukuba broached kwaye kwakubonakala ngathi kukho ukuba usungulwe ezinye Martijn Vrijland kwifomu yalo Schiffer Irma. Eli bhinqa lakhuthazwa ngamandla ngamaziko onke awaziwayo kwiimidiya ezizezinye. Saye sabona intatheli endala egama linguJanneke Monshouwer ebonakalayo eyenza into efana neyiphi intatheli yaseJamani u-Udo Ulfkotte ayeyenzile ngaphambili. iminyaka Ulfkotte 17 wayesebenzela Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine 'okanye' FAZ 'waza waphuma incwadi apho wavakalisa ukuba CIA maxa wambi nguLwesihlanu zintatheli. I-Netherlands ayikwazanga ukuhlala ngasemva, ngoko safumana 'u-Udo Ulfkotte' ngohlobo olumnandi noluthembekileyo uJanneke Monshouwer. Wayeshumayela ngokungafaniyo ngeendaba zaseDutch. Iqela le-WantToKnow, iindaba zeMhlaba, kunye nezinye iindawo ezikhuthaza ngokugqithiseleyo amagama amasha apha ngentla. Yiyo kanye loo nto uMdatshi owayevusa ukufuna ukuva.
Sakhawuleza sabona ukuvela kwazo zonke iintlobo zamagama amatsha, njengoMartijn van Staveren, uWillem Felderhof kunye noConen Vermeeren. Bonke abantu ababandakanyeka kwimimandla engaphantsi "yeengcamango zobuqhetseba" okanye ngokomoya. Wavuka ngequbuliso liphuma emhlabeni kwaye kwabonakala ukuba, ukususela kwixesha lam esebenzayo kakhulu 2013, kwase kuvele scaled mkhulu ukubamba ukuvuseleleka yabantu eNetherlands. Akuyinjongo yam ukuxoxa nokuzalisa onke la magama 1 kwi-1, kuba unokufumanisa ukuba ngubani okanye ongathembekiyo. Ndiyichaza kuphela imbono yam. UMartijn van Staveren Ndithe ndathetha kanye; UWillem Felderhof ngokukhawuleza waba ngumqhubi wechungechunge lweenkomfa ebizwa ngokuthi 'Open Mind' kunye noCoen Vermeeren bazivuselela njengo-Ufo no-911 ingcali.
Ziziphi zonke ezi magama ezifanayo kunye nokuhamba kwazo ngokukhawuleza kunye nebhajethi yabo ebonakala ngathi ingenamkhawulo, amathuba kunye 'nokuva kakuhle kwiprofayili' kunye nokukhuthazwa kwabo yiyo yonke into kunye nabo bonke kumazwe angaphandle. Oko kwaye kukugqala njengento entle, ngoxa ungathanda unochuku, umona, unxunguphalo okanye self-wadala bodwa 'Martin Vrijland ngazo. Akukho nto. Ke ndithanda ngokukodwa ukuba nembono malunga beza ukusebenza kakuhle kunye abafuna inyaniso, ukuze bajonge ekubhaleni malunga izimvo zam phezu iindaba kunye yangoku nemicimbi, kodwa ngenxa yokuba ndiye ndaphawula ukuba izifundo ngokoqobo libandla kwaye ivame ukuba desinfo okanye Iimpawu zamanga, ndivakalelwa ukuba ndinike isilumkiso esicacileyo. Ndiyakukhumbuza nokuba zonke iiwebhusayithi kwimidiya ethile yandihlahla xa (kunye nokuchasene kwangoko) ndatyhila inkohliso uMicha Kat. Oko kufuneka kwenziwe insimbi.
Ziziphi izinto eziqhelekileyo ezikhoyo ezikhoyo zokungabikho kwamakhowe okuba zibonakala zingatshintshi ngokumenyezelwa 'kweengcamango zabo zobuqhinga'. Ngaba oko kuyimfuneko? Okumangalisa ukuthetha ukuba oku kwenzeka kwimeko yam. Oku akuzange kuphele ngokunyelisa kunye nokunyundela, ukufakwa entolongweni, ukuhlaselwa kunye nokunye, kodwa kwanokuba uye waya kude kangangokuba zonke iintlobo zeenkcukacha ngeentombi zam ezibandakanya ubudala, indawo yokuhlala kunye nesikolo zithunyelwe. Kodwa loo nto yahlala ingabonwa kwaye ayiqeshwanga yizo zonke ezinye iindawo zeendaba. Ewe, mhlawumbi unokuba netyala kuwe, ingcamango ingaba, kodwa into yokuba izinto zenziwe kwaye ukuvakalisa akukho nto; ukuba le nto iboniswe ukuba ivela kumkhono womqeshwa welizwe; ukuba iinjongo ezinjalo azikho kwezinye iindwendwe; Ukongezwa kwinto yokuba bayakhuthaza baze baxhase, kufuneka baphakamise imibuzo. Ingaba ngaba ngaba bonke baqeqeshiwe kwaye baqaliswa ngu-AIVD? Okanye ngaba ingcinga yelenqe?
Lindela umzuzu. Ngoko sinokukholelwa ukuba oorhulumente basebenzisa iiflegi zobuxoki kunye neentengiso kunye nokusetyenziswa kweendaba eziphathekayo, kodwa asikwazi ukukholelwa ukuba inkonzo yemfihlo inomdla wolunye kwi-pocket yayo? Kutheni ungathanda omnye ukunyakaza okunzima kakhulu uhlale ungaphazamiseki? UVladimir Lenin sele sele echaza ukuba indlela efanelekileyo yokulawula ukunganyangekiyo kukunika inkokheli kule nkcaso. Okanye ngaba yinto eyenzayo kwi-Soviet Union endala? Ingaba ngaba iinqwelo ze-AIVD zaseNetherlands zinokuba zizityebi kunokuba abantu abaninzi bacinga? Ngaba kunjalo i-Godfather yamajelo aseMelika, uMarcel Messing, owafika kwiindawo eziphezulu kwaye engabonakali kwintlalo, ungumsekeli walo mgaqo waseNetherlands? Ukuqhuba inkcaso efanelekileyo, kufuneka unike abantu oko bakufunayo: 'inyaniso'.
Xa ufuna ukunyaniseka, inqaku kukuba ubuncinane unesivakalelo sokuthi 'oku kuvezwa ngokucacileyo'. Emva koko uhamba nomzuzu we-eureka apho wonke umntu efuna ukukhungatheka malunga neendaba eziqhelekileyo kunye neengcambu zakhe ezicacileyo kwaye (ngokubanzi) zikho. Kubonakala ngathi le mfuneko ifakwe kwi gear ephezulu ukusuka nge-2014. U-Irma Schiffers, umzekelo, uxakeke kakhulu. Kukho into ebantwini bonke kwiimidiya ezihlukile. Ngaba ukholelwa ukuba umhlaba uphawule? Emva koko uya kufumana oko. Ukholelwa kubafokazi okanye i-UFOs, unako ukuya kwiindlela ezininzi kwaye unokufumana "ukuqiniswa" kokomoya nomntu ofana noMartijn van Staveren. Ngaba ukholelwa ukuba abantwana bahlaselwa ngedini? Emva koko unokufumanisa ukuba kungekudala "nombhanki wangaphambili kunye no-Ronald Bernard". Kwaye kukho iikhosi apho wonke umntu uvala iindlebe zabo ngoku: 911, izitofu kunye ne-chemtrails. Uya kuhanjiswa kwi-WantToKnow, iMicimbi yeMhlaba, iNinefornews kunye njalo. Siyakwazi ukuyibiza ngokuthi 'icawa enye yeendaba' kwaye icawa ngokwemvelo ifuna abaphathiswa abangabikho. Abafundisi abanemvelaphi efanelekileyo, ulwazi olunzulu kunye nebali elikhuthazayo. Abo nobuganga kubiza ukuba umhlaba uthe tyaba kwaye ukuba "ukusebenza iflegi wobuxoki" maxa wambi mhlawumbi bubuqhinga okanye umntu ukuzibiza ngokuba wena udlalwa abashumayeli TV zoal wakha wadlala uluntu American, awufuni kwi icawa.
Kungenxa yeqhinga lakho lokukhangela inyaniso. Esi sikhuthazo sisiphumo esicacileyo sokuvuswa kwabaninzi ngenxa yokuqhatha nokukhohlisa kweendaba eziqhelekileyo. Kodwa ukufumanisa inyaniso, akufanele ufunde ukusebenzisa ingqondo yakho. Kufuneka ufunde ukuba unokukufumana ngokuthe tye ngecawa eqinileyo neyithembekileyo: enye icawa yeendaba. Ngale ndlela uza kuphinda ufunde ukuthembela ngumbulungiseleli, njengoko umfundisi washumayela inyaniso yepulpiti kubahambi becawa. Ngale ndlela uza kuphinda unakho ukuthembela kubalungiseleli abatsha bamanye amajelo. Yingakho kubalulekile ukuba uyazi ukuba unxulumene nabafundisi abanokwethenjelwa abafuna ukunyaniseka inyaniso ngenxa yokuba baye baphando. Ngoko ke akudingeki wenze nantoni na. Awunaso ixesha lokuba umfundisi uye wafunda. Ewe, loo nto imalunga nomyalezo weCoöperatie Vrije Media; iqhinga elibonakalayo liqaliswe ngu-Ad Broere kunye no-Irma Schiffers, kodwa oko kwenzeka ngokwenene kwimithombo yeendaba eziye zisebenza ndawonye emva kweemboniso. Leli liqalo elase lixutyushwa ngexesha lam lokubakho kwamanye kwiintlanganiso kunye noMarcel Messing.
Yiyiphi inzame kwiminyaka yamuva? Xa kubonakala ukuba ndahlukane labaphandi ezingafunekiyo Martin Vrijland ngokusebenzisa ngodaba banyelise intanethi, akuzange kubangele "ukuyeka", nto leyo amawaka abafundi yonke imihla ngesiquphe eboniswa oko izikhokelo ezintsha kwezo umbhali okungafunekiyo. Ukuvuza kwakufuneka kuvaliwe kwaye kuvalwe ukuvuza, inkundla yokudlala yayilungiselelwe ngokupheleleyo ngemithi. Imininzi yemithi enokukhula konke kwaye yonke into inomdla ukuthetha ngezihloko ezikhankanyiweyo, kodwa isoloko ihlukile. Ihlathi lamawebhusayithi kule mijelo yezinye iyakhiwa. Loo wehlathi lonke elo xesha sele kulawulwa yi-AIVD emva emfihlekweni asebenza kwezo sayithi sele kakuhle kunye njengabaququzeleli njengoko Marcel Brass kunye Guido Jonkers, kodwa waba amehlo endle olubonakalayo njengoko ngokucacileyo en ulwazi oluninzi. Awubonanga ihlathi ngaphandle kwemithi! Kwaye kwakunjalo injongo. Na tada! Ngokukhawuleza kukho abambalwa abathathu abanokwenene abanokwenene abanokwenene (abaye bavela kwi-litter efanayo). U-Ad Broere wezoqoqosho othembekileyo othembekileyo kunye no-Irma Schiffers othembekileyo. Ngaba akunjalo kukunika into ephakamileyo kakhulu 'evakalelwa'? Kwaye kunjalo sinalo lonke i-Arjan Bos yeMhlaba yeNdaba yeMhlaba ebumnandi kwaye ivuyayo. Ngokuqinisekileyo ufuna ukukunceda zonke iicawa ezincinci zibe yinto ephakamileyo ye-1. Unokuqikelela ukuba ngubani oqoka abaphathiswa. Kwaye ungathanda ukuba ilungu leli bandla? Icawa idinga imali ukufeza zonke izicwangciso zayo ezilungileyo. Ukuba kukho imali emva kwezinto (njengoko uMarcel Messing ubonakalise ngengozi phambi kwam entlanganisweni) akudingeki ukuba wazi. Icawa yamaKatolika inayo imali, kodwa ngokuba ilungu uqinisekisa ukholo lwakho, kwaye uzibophezele ebandleni. Nifanele uyenze ngoku kunye necawa entsha yeDe Vrije Media. Baya kukhangela inyaniso kuwe. Emva koko, ngoku "baqinisekisiwe". Hayi, kwaye ukuba sele usungulungu lecawa ethembekileyo, awuyi kusayi kuxhasa inkxaso enjalo uMartin Vrijland, ongenakufumana uncedo lwezentlalo. Emva kwakho konke, sele usenegalelo kwiqela elizibonakalisa elithembekileyo. Wamkelekile kwibandla elitsha. Umsebenzi uphumelele. (Funda ngaphezulu phantsi kwevidiyo)
Ukususela ngoku unako ukukhonzwa "nenyaniso yokwenyaniso" yeDe Vrije Media. Yile ndlela indlela i-AIVD eyayidala ngayo kuqala ihlathi kwaye yindlela esilungiselela ngayo isisombululo ngoku. 'Indlela efanelekileyo yokulawula inkcaso kukukhokela wena'. Kodwa uyazi njani ukuba i-AIVD isemva kwayo? Uyazi njani ukuba lihlolwe? Thatha iimvelaphi zeBhanald Bernard owayesebhange! Ngubani othetha inyaniso kuphela? Ewe, kunjalo! Njengoko ndathi, ukhangele inyaniso kwaye ukhonjwe ngenyaniso. Nangona 'inyaniso' yinto enxulumene nayo. Ngaba uyazi ukuba uyayibona inyaniso xa usesinqanaweni uhamba ngomgama wonxweme? Ukuba unamanzi okukujikeleza, jonga ulwandle umgama uze ujikelezwe ngabagibeli bakho; inyaniso engenakuphikiswa. Into ongenakukubona yintoni eyenzekayo elunxwemeni. Iinqanawa ezilawulwayo zihamba ngomda.
Kulo mzobo ungezantsi kufuneka ukhangele ngokukhawuleza ukuze ubone imigca yegrey-intersecting. Kwaye ngamanye amaxesha ubona isipho. Kodwa ngaba unokubona onke amanqaku ngokukhawuleza?
Kwenye umfanekiso (bona ngezantsi) ungabona ngokucacileyo umfanekiso abamnyama nabamhlophe, kodwa ukuba ukhangela ithutyana elide 10 seconds (focus amehlo akho amachaphaza 4), ngoko blink amehlo akho yonke ubuhle obumbeneyo phezulu, uza kubona "umhlobo oqhelekileyo". Uza kubona umfanekiso ofihliweyo. Ngale ndlela indlela oyijonga ngayo inyaniso inokudlalwa. Ukuba ucinga ukuba ubona into elungile, usabonakala ulahlekelwa ngamaphuzu ambalwa okanye umfanekiso obonakalayo ufihla umfanekiso ophantsi. Kuthekani ukuba iindaba eziqhelekileyo zikunika 'abamnyama' kumfanekiso apha ngezantsi kunye nenye imidiya "mhlophe"? Yintoni ephumayo? Awukwazi ukubona umfanekiso ofihliweyo. Kwaye, ngokokucinga kwam, yinjongo.
Igama elithi 'usebenze ngokukhanya' lixesha eliyintanda kwiimidiya ezizezinye. Ukukhanya 'kukhanya ebumnyameni. Okanye noRonald Bernard le movie ucacisa ngokunjalo xa uthe iqela labantu lihlezi ebumnyameni ixesha elithile kwaye kufuneka lisetyenziswe ebumnyameni. Emva koko izibane zikhanya ngokukhanya kwaye wonke umntu ugxininiswa ukukhanya. Izandi ezithakazelisayo, kodwa ukukhanya kungabhekisela ekukhanyeni kweLuciferian. Ndiza kubuya emva koko. Umbuzo omele uzibuze wona: Ukuba enye imidiya ibonisa 'umhlophe' (ukukhanya) kumfanekiso omnyama weendaba eziqhelekileyo, ngaba uyayibona inyaniso okanye isithunzi se nyaniso?
Ufuna ubungqina obunzima bokuthi enye imidiya iye yasungulwa yi-AIVD. Ziyathetha kakhulu into endiyenzayo, ngoko ndikuqonda. Kufana nomfanekiso ongentla; ibonisa wena omnyama kunye nomhlophe, kodwa ukuba ukwazi ukubona umfanekiso ofihliweyo, kufuneka ukhangele kwiidotshana ze-4 ixesha elide, uze ukhangele amehlo akho agxilise kwaye uqaphele oko ubonayo. Ndiyakwazi ukukubonisa kuphela intambo yomfanekiso obonakalayo obonwe. Kanti ngamanye amaxesha unokutshilo kwiintlobo ezenziwa ngabantu kwaye ukuba amabali abonakala 'amhlophe' kumfanekiso omnyama, kodwa ukuba afihle imifanekiso efihliweyo. Ukubona umfanekiso ofihliweyo kwimifanekiso ebonakalayo, vula nje amehlo akho.
Ibali likaRonald Bernard ngolu hlobo ngumzekelo ogqityiweyo. URonald uxelela konke okubonakala kulungile. Ukwazisa indlela umhlaba webhanki usebenza ngayo kwaye uchaza nokuba izapolitiko ziinkwenkwana zamakhwenkwe e-banking system; inkqubo yebhanki phezulu kwipiramidi. Kuphezulu kwipiramidi yibhanki yeBIS; phantsi kweebhanki eziphambili kwaye phantsi kweebhanki eziqhelekileyo. Uchaza umfanekiso owaziwayo wepiramidi ukuba wonke umntu osebenzele ixesha elide wayesazi ezinye iindaba. URonald ubonakala ebeka umunwe kuwo onke amanxeba! Irma Schiffer udliwano-ndlebe naye kunye ekupheleni Part 2 komdyarho udliwano-ndlebe (leyo yaveza kuthatha inani ecocekileyo Masonic lemizuzu 33) uRonald uye tie Masonic kwakhona itsale nabani na ukuthetha nobuganga ukuzoba ibali bakhe kwamathandabuzo kanye lukhuni nomsindo . Oku mhlawumbi kwakujoliswe kwimidiya elawulwayo echaphazelekayo noMicha Kat, ababezingela iCV yaseBernard. Andizange ndibhale ngoRonald ngexesha lokuveliswa kwefilimu.
Ndiye ndicinga ngeendlela ze-NLP kwimidiya ephakathi ngaphambili, kodwa uRonald Bernard uyisebenzise ixesha elipheleleyo. Ngokukodwa isenzo somzimba kwimigangatho yokugqibela yevidiyo apha ngezantsi yenza izibonakaliso ezicacileyo. Ukusasaza izandla kunika umyalezo osisigxina "Ndimkhulu" (kwaye uncinci); Iphimbo elithulileyo lokuzithiba elahla phezu komsindo libe ngumzwelo kwaye ekugqibeleni lenze iinyembezi; iminwe ekhombayo ithi ilizwi elivuthayo nelulwimi 'lubambe iqhosha lakho'. URonald unikeza isigidimi esingenasicatshulwa esithi "Ndiyigunya" kwisitayela sokugqoka, isenzo somzimba kunye nokuthetha. Udliwano-ndlebe olupheleleyo lufakwe "kwiinyaniso ezingenakucatshulwa" kwaye i-Irma inomsebenzi wokuthi 'yebo' kunye 'nelungelo', ukugcina ingqondo yakho kwindlela yokumkela. (Funda ngaphezulu phantsi kwevidiyo)
Yam nqaku yokuqala NgoRonald Bernard Ndacacisa ukuba kuyacaca njani ukuba ufunde ukuba ungumdlali. I-Irma Schiffers nayo ibonakala isebenzisa iMerk Brown 'Imimangaliso yokuthengisa' indlela (bona le movie) baqeqeshiwe. Ngokuqinisekileyo ibali lakhe liphelele. Ungumculi, u-HSP kunye .. unokukwazi ukufunda oko akutshoyo [ukucaphula]
Ozelwe (kuphazamiseka ngakumbi) kwi-3 Februwari 1962 kwindawo ethile eHilversum; I-Jungian therapist; umhloli we nyaniso; umqeqeshi; umlindi; zizinikezele kubantu, kwizilwanyana kunye nemvelo; ezinobuhlungu kunye nobuthakathaka ekukhohliseni kunye nenkohlakalo, umdwebo onemifanekiso; (ex-) bassist; Ewe HSP; i-socialisticistist; umva, ukomoya kunye nomhlaba (yonke into!) kunye ne-waterman kwisimo se-optima; Ndiya kuyo inkululeko, ukuzimela, ukulingana, ubulungisa, ukusabalalisa nokunyaniseka. Idla ngokuphandlelwa ngabanye njengento engenakulinganiselayo, i-eccentric neyinqaba ".
Kulapho sinegama elithi 'umkhanyisi' kwakhona, oya kutshaya ngokuphindaphindiweyo kumajelo athile. Uyakhumbula ukuba ngubani lo ukhanyiso ovela kuyo; ngubani obala imibala emhlophe kumfanekiso omnyama? Kakade, i-Irma iyanqabana kakhulu neHSP yakhe. Yinto entle, kuba ngenxa yolu (kwaye kungengenxa yenkxaso yakhe evela kwi-AIVD) ngokukhawuleza uyakwazi ukuthetha ngayo yonke iqhinga ukusuka kwi-2014. Kodwa oko akuyena nto kuphela! Irma iphakathi. Ewe, uhlala kakuhle ne-Irma! Yena uvakalelwa nje okanye into echanekileyo kwaye uyayifaka emhlophe kumfestile omnyama.
Ngoku ungacinga ukuba ndiza kubiza kwaye ndingabuyi ubungqina. Ngaba ubonile into ofuna ukuyibona kumfanekiso omnyama nomhlophe? Ndiyicacise imida. Kufuneka wenze umgudu wokukubona kwaye kungekhona wonke umntu obonayo. Ububungqina ngamanye amaxesha bubonisa uphawu kunye nemilayezo efihliweyo.
Kuze kube kutshanje, le miyalezo efihliweyo yayingabonakali ngokucacileyo, kodwa uya kuboniswa. Ingxaki kuphela kukuba awukwazi ukuyibona. Usenokuba sele usebandleni okwangoku kwaye sele sele uhlawula igalelo kunye neCoöperatie Vrije Media okanye sele uhlawule imali yakho ye-€ 100 kwi-Happy B (ongenakukwazi ukuzibiza ngebhanki). Awuyi kuhlasela icawa ecaca ngokukhanyisa emnyama? Kulungile, ngoko unokuvala amehlo akho kumqondiso.
Ngokomzekelo, umfundi uqikelele oku okulandelayo malunga noJoy B (inkunzi) kaRonald Bernard [icatshulwa]
Ndikhangele eli xesha ixesha elide Ikhasi lasekhaya lebhanki elonwabileyo. Into yokuqala oyabona ukuba yiyo logo ye-orange emele isimboli sepallic kwiimveliso zayo. Ngokuthe ngqo kweso siqubulo esithi "ibhanki yakho kwenzelwe."
Kwaye omnye umvakalisi wathi oku okulandelayo [icatshulwa]:
I-logo yeDB yeDe Blije Bank iboniswe. Ngaba uyakhumbula ezo zithombe zeqela laseRothschild kuquka neefoto? Ikhadi lokumema libhaliswe ngokulandelana bonayo apha.
Isibuko ngokwenene sibonakaliso esibalulekileyo kwi-Aleister Crowley (Luciferian) ubuchule bokuthi 'ukutshintsha ingxoxo' kunye nezinye 'iindlela zokungena.' Isibuko sibonisa, njengokuba kunjalo, ukuba unguLuciferian. I 'd' kwi logo yeNwabile B inika 'b' kwisikrini sombukiso. Ngaphezu koko, ezi ncwadi zilandelayo zihamba ngokwenene zinika uphawu lwepallic (apho igama elithi 'ukusekwa' kwisivakalisi esithi 'ibhanki ngokubunjwa' ngokubhekiselele kubhekisela kwi-phallus erection). Ngoko ke isimboli saseLuciferi. Kodwa ke, masingenzi nto nzima kwaye nje sijonge kwi logo ye-United People isiseko. Akufanele ukhangele kakuhle ukuba uyibone ipiramidi? Abalandeli bakaLusifer nabaxhasayo 'Sonke singabanye,' uRhulumente Wehlabathi Omnye kunye 'Nenkolo Yehlabathi Elinye' bahlala bebonisa lwabo uLuciferianism kuba bakholelwa ukuba oku kuhlonipha umthetho wokuzikhethela. Bakuthanda ukukubonisa inyaniso, ukuze yonke imifanekiso ibe nemibala. Benza umhlophe kumgca omnyama, kodwa ubona kuphela imvelaphi yomfanekiso ofihliweyo.
Abantu abaManyeneyo bafuna ukudibanisa bonke abantu. Ngaba akuyonto leyo iLuciferi? Unako ukujonga ipiramidi kwi logo njengento engenamacala. Ngaba uyayibona isenzo se-666 ngesandla sika-Arjan Bos kwi-Earth Matters kunye neyevidiyo zakhe ze-YouTube? Abashumayeli bezinye iicawa zeendaba ezifana nendawo bathanda kukubonisa apho bahlala khona, kodwa bafihliwe. Ngaba uyayibona isibuko kwividiyo engezantsi emva kwe-Irma Schiffers? (Funda ngaphezulu phantsi kwevidiyo)
Ummangalelwa kwinqaku lam elidlulileyo uyaqhubeka kunye neengxelo (ezingengqiniswanga).
I-De Blije B. isekelwe eSwitzerland, ingaba yintoni enye, akunjalo? Ingcamango yabo iya kuphuhliswa kwaye ixoshwe kwezinye iibhanki, ndicinga ukuba kunjalo.
Ukuba oko akulona uphawu eludongeni? Ngoko ubizwa ngokuba yi-bank-top; likhomba kuzo zonke iindawo ezibuhlungu ezinokufumaneka kwiimidiya ezikhoyo; uqokelela ezi ngxowa-dliwano-ndlebe kunye no-Irma Schiffers; ukuqalisa ibhanki ngokwakho! URonald no-Irma nabo bonke abanye abadlali kwezinye iindaba zendaba baye bazama ukukukholisa ngebali elichanekileyo kwaye elichanekileyo, apho zonke iinkalo zingabonwa ukuba bonke abafunayo inyaniso bangayifumana kwiminyaka. Kuhlanganiswa ngokukhawuleza kwaye kufakwe kakuhle. Kodwa kusekho konke ukuvumba kwinqanaba eliphezulu elibambileyo. U-Irma Schiffers akazange abuze umbuzo obalulekileyo we-1 kwaye onke amabali kaRonald Bernard awanakuqinisekiswa. Nangona kunjalo, yonke imithombo yeendaba iyithathile kwaye isetyenziselwa ukuxhamla imidiya ehlukile kwi-Coöperatieve Vrije Media. Baza kukubonisa indlela ngokusebenzisa ihlathi le-AIVD e-self-created to other sites (ngaphandle kwenkalo ekhomba kuMartin Vrijland).
Ukuphazamiseka kwaye ngoku?
Kuhle, siyabonga ngokuphazamiseka kunye nantoni na ngoku? Ngubani na onokumthembayo ngoku kwaye ndiyakwazi ukufunda okanye kungekhona. "USivela kwidada yangasese, cebisa idoki yangasese"Ngaba kuya kuba lula, kodwa ndikucebisa ukuba ufunde amaqaku am, ingakumbi ukuba ungayishiya" kwibandla elitsha "kunye" nomnye umfundisi ", kodwa ukuba usebenze isakhono sakho somoya kunye nomphefumlo wakho. ukuxhuma. Ewe, 'abasebenzi bokukhanya' bakuxelela oko, kodwa bafuna ukukugcina kwisibalo seLuciferi. Ndiyathemba ukuba uya kusinda kulo. Ngoko ukuba enye imidiya kunye neendaba zibala umbala wakho, kufuneka ubone umfanekiso ofihliweyo ngomfanekiso. Benza ulahleke umfanekiso ofihliweyo.
Khawujonge ngaphaya komfanekiso ongentla kunye nemigca egciniweyo. Uyabona konke ngoku kwaye uchaphaza kwaye kubonakala ngathi amachaphaza axhunyiwe ngala majelo eendaba, kodwa awuboni ngaso sonke isikhathi. Zikugcina kude ekugqibeleni ngokupheleleyo kwe-matrix yaseLuciferi. Nangona baya kukuxelela ukuba imibingelelo yomntwana yenziwa kwiindawo eziphezulu. Ngaba uke wathintela ngohlobo olwenziwa nguRonald Bernard? Okanye ngaba unokuba ilungu leSonto Eliyolo? Futhi ungalibali iMedia Media! Bayifuna ngokwenene inkxaso yakho!
Ziziphi zonke izi ndawo ezenzayo zicela iiminikelo ngenkqubela ngemali. Esi siqhinga sokwenza ngamabomu, ukwenzela ukuba sibambe umoya ngaphandle kweendlela, ezonakaliswayo kwaye ezingenayo ibomvu ebomvu. Ngubani oza kuthatha inkxaso kaMartin Vrijland ukuba axhaswe ngokusisisiseko ukuba zonke iiwebhusayithi (ezixhaswa nge-AIVD) zonke zibonakala zilungile? Ngokunene ... kwaye loo nto yayinjongo.
Inkululeko yentetho inokusebenza ngokusemthethweni, kodwa uya kutshabalalisa uluntu njengemali. Ngale ndlela unokugxekisa ukugxeka kwakho. Ngenxa yokuba ndixhomeke ngokupheleleyo kwiminikelo ngenxa yezobungozi kunye nokuhlambalaza nokuhlaselwa kwe-intanethi, ndifuna ukukucela ukuba undixhase. Oku kunene isibheno esinzulu (ngokuphambene neefowuni ezisuka kwiindawo ezichasene nazo zonke ezihlambalayo).
Ukuze kucacise ukuba andithengisi idokodo, unokujonga ubukhulu bale mivuzo kwi-intanethi esi sixhobo.
Phendula yonke into! Cinga ngokwakho. Musa ukukhohliswa "phantse inyaniso" kwaye ubala umbala, ukuze ungayiqondi imbonakalo eyimfihlelo.
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.369.709
I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?
Eyona ndlela isebenzayo yokulwa i-coronavirus ivela eTshayina (ividiyo)
Ingxaki yeCorona: iphelile nini le nto kwaye kufuneka senze ntoni ngoku?
Ukuwa kwe-cabal 'engenantsingiselo kwaye ngoobani' Q Anon 'Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
IJamani isebenza kwi-coronavirus app egcina umkhondo wokuba ngubani onxibelelana naye
Ikhamera 2 op I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?
UMartin Vrijland op I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?
UHarry makhulu op I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?
SalmonInClick op Ubhubhani weNetflix ': ukuthintela njani ukuqhuma' kwintengiso yokugonyela indawo yonke iSuperHuman-2.0?
Le popup iya kuvalwa ngo:
Ngaba uyigqibile incwadi yakho kwaye ungathanda ulwazi olungakumbi?